China M1013 PVC လက်အိတ်များအရည်အသွေးမြင့် PVC တစ်ခါသုံးလက်အိတ် ၁၀ သေတ္တာများ PVC ဘေးအန္တရာယ်ကင်းသည့်လက်အိတ်စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | Xinyuanjiaye
M1013 PVC လက်အိတ်များအရည်အသွေးမြင့် PVC တစ်ခါသုံးလက်အိတ် ၁၀ သေတ္တာများ PVC ဘေးအန္တရာယ်ကင်းသည့်လက်အိတ်များ
အမှုန့်နှင့်စေးကပ်ပရိုတင်းများမပါ ၀ င်သောအဆင့်မြင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆင့်အတန်းကိုကာကွယ်ပေးခြင်း။ ရာဘာစေး sensitivity ကိုသက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောဗီနိုင်းလက်အိတ်။ ချောချောမွေ့မွေ့, ပုတီး cuff ။ ဆန့အစွမ်းထက်သည်။ အမှုန့်များကင်းသောကြောင့်သူတို့ကော်သို့မဟုတ်အဖုံးများနှင့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မည်မဟုတ်ပါ။
Powder free Vinyl Gloves သည် ၁၀၀% ဒြပ်ထုကိုပေးသည်။ စံဗီနိုင်းထက်ပိုမိုပေါ့ပါးပြီးပျော့ပြောင်းသည်။ ကောင်းမွန်သောခံစားမှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်။ ၎င်းသည် I အမျိုးအစားဓာတ်မတည့်မှုခံစားနေရသောသူများအတွက်ကောင်းမွန်သောနောက်ဆက်တွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။
1. ပစ္စည်းသည် pvc ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အဆိပ်မရှိသော၊ အနံ့မရှိသောနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောလက်အိတ်သည်အသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက်လုံခြုံမှုရှိသည်။
2. လွယ်ကူသန့်ရှင်းရေး၊ လက်အိတ်များကိုတစ်ခါသုံးဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ခါသုံးဗီနိုင်း PVC လက်အိတ်များကို ၀ တ်ဆင်ရမည့်အချက်များ။
၁။ ကျေးဇူးပြု၍ ၀ တ်ဆင်ထားသည့်အခါလက်ချောင်းများကိုချုံ့ပါ။ လက်ချောင်းများသည်ရှည်လျားလွန်း။ အလွန်ချွန်သော်လည်းလက်အိတ်ကိုအလွယ်တကူပျက်စီးနိုင်သည်။
၂။ လက်အိတ်ကျဆင်းခြင်းမှရှောင်ရှားရန်သင်၏လက်ချောင်းထိပ်များကို ၀ တ်ဆင်ပါ။
Latex လက်အိတ်များထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ် - အရည်အသွေးမြင့်ဒြပ် / သဘာဝစေးပစ္စည်းများနှင့်အခြားဒဏ်ငွေအရန်ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောစေးလက်အိတ်များသည်ဆန့်အားကောင်းသောခိုင်ခံ့မှုနှင့် elongation ရှိသည်။ အရေပြားယားယံခြင်းနှင့်ဓာတ်မတည့်ခြင်း၊ ထုတ်ကုန်များသည်အထူးမျက်နှာပြင်ကုသမှု၊ အတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင်ချောချောမွေ့မွေ့ရှိခြင်းနှင့်ကောက်များကိုလွယ်ကူစွာတပ်ဆင်ထားသည်။
Latex လက်အိတ်၏အားသာချက်များ - Latex လက်အိတ်များသည်လက်နှစ်ဘက်စလုံးတွင်ကျယ်သည်။ လက်ကောက်ဝတ်များနှင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်စိုထိုင်းဆဆန့်ကျင်မှုပုံစံရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်ဝတ်ဆင်နိုင်ခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်းခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်အက်ဆစ်၊ အယ်ကာလီ၊ အမဲဆီ၊ လောင်စာဆီနှင့်အမျိုးမျိုးသောအရည်များစသည်တို့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ၄ င်းတို့သည်အမျိုးမျိုးသောဓာတုဗေဒဒဏ်ခံနိုင်မှု၊ ရေနံဒဏ်ခံနိုင်မှုနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးလက်ဖြင့်ကာကွယ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်
Latex လက်အိတ်များသည်အိမ်၊ စက်မှုလုပ်ငန်း၊ အလှအပ၊ သိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသန၊ တိကျမှန်ကန်သောကိရိယာများ၊ မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဘက်ထရီထုတ်လုပ်ခြင်း၊ FRP စက်ရုံ၊ လေယာဉ်ပျံတပ်ဆင်ခြင်း၊
နောက်တစ်ခု: Anti-Saliva Fog Safety မျက်မှန်များဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးပြုရန်ရှင်းလင်းသောမျက်လုံးအကာအကွယ်မျက်မှန်များ
SGS သည် ၇၅% အရက်သေစာသောက်သုံးမှုမရှိသောဆေးများကိုစစ်ဆေးသည်။
Anti-Saliva Fog Safety မျက်မှန်များမျက်မှန်တပ်ခြင်း။
အရည်အသွေးမြင့်ခွဲစိတ်တစ်ခါသုံး Non- ယက်ဂါဝန်